Aqoonkaab Waa maxay sanboor | Aqoonkaab
Waa maxay sanboor
Oct 27, 2016Caafimaadka
Sanboor waxaa sababa xasaasiyad kiciye aan inta badan dhib u laheyn jidhka. Sanboorku waa falcelin aan caadi ahyn oo uu jirka la sameeyo walxa aan dhibaato u kuhayn jirka. Manka ayaa ah xasaasiyad kiciyaha ugu badan ee sababo samboorka.
Madax xanuun badan
Inta badan waxaa la dareema kuwo kamid ah astaamaha kor ku xusan isla marka uu jirka la kulmo xasaasiyad kiciyaal. Calaamadaha qaar sida madax xanuun soo noqnoqda ama daal waxaa la dareemaa marka uu jirka marar badan la kulmo xasaasiyad kicye. Qandho ma ahan astaan lala xiriiriyo samboorka.
La hadal dhaqtar hadii astaamaha samboorka aysan hagaagin todobaadyo gudahood.
Halista in samboor uu yimaado
Xasaasiyad waxey saameyn kartaa qof walbo, hasa yeeshee waxaa unugul inuu ku dhaco qof tolkiisu ay qabaan xasaasiyado.
Waxaa loo daweeyaa qaabab kala duwan sida
Dawooyinka lagu buufiyo sanka
FG: fadlan la tasho dhaqtar inta aadan bilaabin qaadashada dawo.
Sidee looga hortagaa xasaasiyadaha
Sida ugu wanaagsan ee looga hortago iney soo baxaan astaamaha xasaasiyada waa inaad maareysaa inta uu san jirkaaga u jawaab celinin si xun.
Cabdilaahi Cabdi Muuse
Previous PostShirkadda microsoft oo soo saartay computer desktop ah !! Next PostShaaha caano leh iyo caafimaadka